Esona siXhobo sokuLuphala siGqibeleleyo: INicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ikhaya > INicotinamide Mononucleotide (NMN)
Emva kophononongo luka-2019 kugqityiwe oko Nicotinamide Mononucleotide kukhuselekile ukusetyenziswa kwabantu ukuba ukusetyenziswa kwayo kuthintelwe kumda obekiweyo, iinkampani ezininzi zokuvelisa zingene kwimarike kunye neminikelo yazo. Oku kugqitha kokukhetha kushiye abathengi bedidekile ukuba yeyiphi I-Nictonimade Mononucleotide (NMN) isongezelelo ilungele bona. Ngokoluvo lwethu, olona nyango lulungileyo lokuguga lweNicotinamide Mononucleotide (NMN) kwi2021 yinkampani yaseCofttek.
ICofttek yinkampani ekalwe ngo-A + esele ikwimakethi phantse iminyaka eyi-12 kwaye iphuhlise isiseko somlandeli othembekileyo ngeli xesha. I-NMN powder ebonelelwa yinkampani kuvavanywa iilebhu kathathu, ibanga lamachiza i-NMN ifunyenwe kwiinkampani ezifanayo ezazibonelele nge-NMN kwizilingo ezahlukeneyo zeklinikhi zabantu ezenzekileyo kule minyaka idlulileyo. Inkqubo ye- Umgubo we-NMN ebonelelwa yiCofttek yenza ukuba lula ukungena kwayo emzimbeni, ngaloo ndlela yandisa ukubakho kwemveliso kunye nemisebenzi yayo yomzimba. Eyona nto ibaluleke kakhulu, le powulu iza ngobuninzi kwaye ungayigcina iinyanga ezintathu. Konke kuyo yonke le nto enye yezongezo ezilungileyo ngoku ezikhoyo kwimarike enomgangatho ophezulu womsebenzisi kwaye ivela kwinkampani ehambise iimveliso ezinokuthenjwa nezisebenzayo unyaka nonyaka.
Yintoni iNicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Yintoni elungileyo yeNmn?
Ngaba i-nmn ingaguqula ukwaluphala?
Uyinyusa njani iNmn ngokwendalo?
Ngaba iNmn ingonyusa ubude bexesha elide?
Uhlala ixesha elingakanani kwi-Nmn kwinkqubo yakho?
Kwenzeka ntoni xa uyeka ukuthatha iNmn?
Ngaba iNmn ikwenza ubonakale umncinci?
Leliphi elona nyathelo lilungileyo lolusu eligugileyo?
Ndingayiguqula njani imibimbi ngokwendalo?
Ndingalujika njani ulusu olugugayo?
Ucebisa ntoni uSinclair?
Ngaba i-Nmn ineziphumo ebezingalindelekanga?
Ziziphi iziphumo ebezingalindelekanga ze-resveratrol?
Ngaba inicotinamide ikhuselekile ukuthatha yonke imihla?
Kutheni i-NADH imbi kakhulu?
Yeyiphi engcono iNmn okanye iNR?
Yeyiphi eyona nmn yongezelelekileyo?
Ngaba i-nmn iguqula ukuguga?
Yimalini ekufuneka uyithathile?
Ngaba iNmn iyafana ne-b3?
Kukuphi ukutya okuneyona nto iphambili kwi-NAD +?
Ngaba iNmn ibangela ukugungxula?
Ndingayithenga phi iNmn eCanada?
Ngaba iNmn ikhuselekile?
Yeyiphi engcono i-NAD okanye i-NMN?
Ndingayinyusa njani i-NAD yam + ngokwendalo?
Kufuneka ndize nantoni ne-NMN?
Ngaba kufuneka ndithathe i-TMG nge-NMN?
Ngaba i-Nmn yi-niacin?
Ngaba i-nicotinamide riboside isezantsi i-BP?
Ifumaneka phi i-betaine?
Kukuphi ukutya okumisa imibimbi?
Ndingajongeka njani ndimncinci ngeminyaka eli-10?
Ndingabumisa njani ubuso bam ekwaluphaleni?
Kukuphi ukutya okukwenza ukhawuleze ukhawuleze?
Yeyiphi ivithamini elungileyo kwimibimbi yobuso?
Kutheni sifuna iNicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Ukusetyenziswa kweNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ungayithenga phi iNicotinamide Mononucleotide (NMN) Powder ngobuninzi?
INicotinamide Mononucleotide (1094-61-7okanye i-NMN yi-nucleotide ekhoyo ngokwendalo kuninzi lokutya esikutyayo. Itholakala kwi-avocado, i-broccoli, ikhukhamba, ikhaphetshu, i-edamame kunye neetumato. Nangona kunjalo, ubungakanani be-NMN ebonelelwa koku kutya akonelanga ukugcina imisebenzi ephambili yomzimba kwaye ke, abantu bahlala becetyiswa ukuba bathathe izongezo ze-NMN. Kodwa, kutheni iNMN ibaluleke kangaka emzimbeni?
INicotinamide Mononucleotide okanye i-NMN sisandulela seNicotinamide Adenine Dinucleotide okanye iNAD +. Ngamazwi alula, i-NMN sisixhobo esiguquka sibe yi-NAD + ngothotho lweempendulo zamachiza ezenzeka ngaphakathi kwiiseli. I-NAD +, kwelinye icala, ithathwa njengebalulekileyo emzimbeni njengoko isenza imisebenzi ephambili, kubandakanya ukulinganisa isingqisho somzimba, ukophula izakhamzimba ukukhupha amandla eselula, kunye nokwenza lula iimpendulo ze-enzymatic, ezinye zazo ezilibazisa ukuguga. Ngelishwa, nangona i-NAD + ifumaneka kwiseli nganye yomzimba, ukuveliswa kwayo kuyancipha ngobudala. Okubaluleke ngakumbi, akukho kutya umntu anokukutya ukwandisa imveliso ye-NAD + emzimbeni. Yiyo loo nto, umzimba ufuna i-NAD + eyandulelayo eguqula ibe yi-NAD + ngaphakathi kweseli, ngaloo ndlela ilungelelanise ukwehla kwayo emzimbeni. Kulapho ukusetyenziswa kwezibonelelo zeNMN kudlala khona.
I-NMN ifunyenwe iphucula umsebenzi we-insulin kunye nemveliso, ekhokelela kwizibonelelo ezongezelelekileyo ze-metabolic kunye nokunyamezelana kweswekile. Ngokukodwa, izongezo ze-NMN zinokunceda ukusebenza ukunciphisa imeko ye-metabolic enjengesifo seswekile, isifo sesibindi esinamafutha, kunye nokukhuluphala.
Ulawulo lweNicotinamide i-mononucleotide (NMN) INicotinamide mononucleotide (NMN) yokuxhasa ikhuthaza iprofayile yokubonisa ukuguga ye-miRNA kwi-aorta yeempuku ezindala, ukuxela kwangaphambili ukuvuselelwa kwe-epigenetic kunye neempembelelo ezichasene ne-atherogenic.
I-NMN inokunikezelwa ngokukhuselekileyo kwiimpuku kwaye ifunyenwe ngokwendalo kwinani lokutya, kubandakanya ibroccoli, ikhaphetshu, ikhukhamba, i-edamame kunye neavokhado. Isifundo esitsha sibonisa ukuba xa i-NMN inyibilikiswa emanzini okusela kwaye yanikwa iimpuku, ibonakala kwigazi elingaphantsi kwemizuzu emithathu.
Izazinzulu zifunde ezimbini eziphakathi, i-nicotinamide riboside (NR) kunye ne-nicotinamide mononucleotide (NMN), ngakumbi kunabanye, kwaye uphando luyakhuthaza. Izifundo ezininzi zibonisa ukuba ukongeza kwezi zinto zandulelayo kunokunyusa amanqanaba e-NAD + kwaye kwandise ixesha lokuphila kwegwele, iintshulube kunye neempuku.
Isifundo sethu sangoku sibonisa ngokucacileyo ukuba i-NMN ifunxwa ngokukhawuleza ukusuka emathunjini ukuya ekujikelezeni kwegazi ngaphakathi kwe-2-3 min kwaye ikwasuswa ekujikelezeni kwegazi ukuya kwizicubu ngaphakathi kwe-15 min.
Zombini iResveratol kunye neNMN zisebenza ngokuphucula amandla eeseli emzimbeni wakho ukuzilungisa. Ke, ukuba ubathatha ithutyana kwaye uyimise ayizukubangela ukuba ubuyele kwangoko kwimeko obukuyo ngaphambi kokuba ubathathe kuba utshintsho lolona phuculo lwenziweyo kwiseli.
"Ilebhu yethu ibonakalise ukuba ukunika i-NMN iimpuku ngaphezulu kweenyanga ezili-12 kubonisa iimpembelelo zokulwa ukwaluphala." Ngokuka-Imai, ukuguqulela iziphumo ebantwini kubonisa ukuba i-NMN inokubonelela umntu ngemetabolism yeminyaka eli-10 ukuya kwengama-20 emncinci.
Izixhobo ezili-12 eziLungileyo zokuLwa nokuGuga
I-Nicotinamide riboside kunye ne-nicotinamide mononucleotide
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Theanine
Nciphisa ukutya iswekile.
Sebenzisa ioyile yekhokhonathi.
Sela iti yelamuni yamagqabi yebhalsam.
Guqula indawo yokulala.
Hlamba ubuso bakho.
Nyusa ii-antioxidants zakho
Ukunceda abaguli babo bathintele ukwaluphala kolusu ngaphambi kwexesha, iidermatologists zinika abaguli ezi ngcebiso zilandelayo.
Khusela ulusu lwakho elangeni yonke imihla.
Faka isicelo somsuki we-tanner kunokuba ufumane i-tan.
Ukuba uyatshaya, yeka.
Kulumkele ukuphindaphinda imbonakalo yobuso.
Yitya ukutya okusempilweni, okunesondlo.
Sela utywala obuncinci.
Zilolonge iintsuku ezininzi zeveki.
Coca ulusu lwakho ngobunono.
Hlamba ubuso bakho kabini ngemini nasemva kokubila kakhulu.
Yeka ukusebenzisa iimveliso zokhathalelo lolusu ezihlabayo okanye ezitshisayo.
I-Resveratrol-1g / yonke imihla-ngeentsasa ngeyogathi (jonga apho ungathenga khona) INicotinamide Mononucleotide (NMN) - 1g / yonke imihla - ekuseni (jonga apho ungathenga khona) ebusuku - ngaphandle kweentsuku zokuzilolonga.
Xa ithathwa ngomlomo: I-Nicotinamide riboside i-POSSIBLY SAFE xa isetyenziswe ixesha elifutshane. Iziphumo ebezingalindelekanga ze-nicotinamide riboside zihlala zimnene. Iziphumo ebezingalindelekanga zinokubandakanya iingxaki zesisu ezifana nokucaphuka, ukudumba, okanye iingxaki zolusu njengokurhawuzelela nokubila kakhulu.
Xa ithathwa ngomlomo: I-Resveratrol KUNYE UKHUSELEKILE xa isetyenziswe kwiimali ezifumaneka kukutya. Xa uthathwa ngeedosi ukuya kuthi ga kwi-1500 mg yonke imihla ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-3, i-resveratrol i-POSSIBLY SAFE. Iidosi eziphezulu ukuya kuthi ga kwi-2000-3000 mg yemihla ngemihla zisetyenziswe ngokukhuselekileyo kwiinyanga ezi-2-6. Nangona kunjalo, la maqondo aphezulu e-resveratrol anokubangela iingxaki zesisu.
I-Nicotinamide riboside inokukhuseleka kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa. Kwizifundo zabantu, ukuthatha i-1,000-2,000 mg ngosuku akukho ziphumo zibi. Nangona kunjalo, uninzi lwezifundo zabantu lufutshane ngexesha kwaye bambalwa abathathi-nxaxheba. Ukufumana umbono ochanekileyo wokukhuseleka kwayo, kufuneka kwenziwe izifundo zabantu ezomeleleyo.
Le NADH igqithileyo inokuphula ibhalansi ye-redox phakathi kwe-NADH kunye ne-NAD +, kwaye ekugqibeleni ingakhokelela kuxinzelelo lwe-oxidative kunye neendlela ezahlukeneyo ze-syndromes zemetabolic.
I-NR ihlala icingelwa njengesandulela esisebenza kakuhle kwi-NAD +, kodwa i-molecule yayo yomzala i-NMN, ngelixa ingesiso isithako esisisiseko, iphakamisa amashiya njengomntwana omtsha kwibhloko.
I-NMN inkulu nje kune-NR, oko kuthetha ukuba ihlala ifuna ukwaphulwa ukuze ilingane neseli. I-NR, xa ithelekiswa nezinye i-NAD + zangaphambili (njenge-nicotinic acid okanye i-nicotinamide) ilawula ngokugqwesileyo ekusebenzeni kakuhle. Kodwa nika i-NMN umnyango omtsha, onokungena kuyo, kwaye ngumdlalo omtsha ngokupheleleyo.
Amacwecwe e-NMN Sublingual Tablets.
I-NAD + yeGolide yeLiposomal NMN.
Iindlela zokunyanzela ukonyuka kwamanqanaba e-NAD + zibonisiwe ukuphucula ukusebenza kwe-mitochondrial kwizilwanyana ezindala, kuguqula ezinye zeelahleko ezenzeka kubudala. Ukulawulwa kwe-nicotinamide mononucleotide (i-NMN) kubonisiwe ukunciphisa ukungasebenzi kakuhle okunxulumene nokuguga.
Ngelixa izifundo ziye zafumanisa ukuba iNicotinamide Mononucleotide okanye i-NMN ikhuselekile ekusetyenzisweni komntu, kusaqhutywa uphando ukuze kufunyaniswe owona mthamo kunye nokuhamba rhoqo kweedosi zeNMN ebantwini. Nangona kunjalo, izifundo esele zenziwe ukuza kuthi ga ngoku ziye zafumanisa ukuba idosi efikelela kwi-500 mg ngosuku ikhuselekile emadodeni. Kule mihla, iNicotinamide Mononucleotide ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya iipilisi kunye nomgubo. Ababoneleli ngeNMN bongeze ukuba izongezo zomlomo zisebenza ngokunyusa imveliso ye-NAD + emzimbeni. La mabango asekwe kwinto yokuba iSlc12a8, i-nicotinamide nucleotide transporter, iyanceda ukufunxwa kwe-NMN emathunjini.
I-NMN ayisiyiyo. I-NMN ayilulo uhlobo lwevithamini B3, kwaye azikho izilingo zeklinikhi ukubonisa ukuba iyayonyusa i-NAD ebantwini. I-NMN ayilulo uhlobo lweemolekyuli eziya kuthi zithathelwe ingqalelo njengevithamini njengoko inephosphate, echaphazela amandla ayo okungena kwiiseli.
Ukutya okuphucula amanqanaba e-NAD
Kukho ukutya okuthile okunokunyusa amanqanaba e-NAD emzimbeni. Ezinye zazo zibandakanya:
Ubisi lobisi-Uphando lubonakalisile ukuba ubisi lweenkomo ngumthombo olungileyo weRiboside Nicotinamide (RN). Ilitha yobisi lwenkomo olutsha luqukethe malunga ne-3.9µmol ye-NAD +. Ke ngelixa unandipha iglasi yobisi ehlaziyayo, eneneni uya usiba mncinci kwaye usempilweni!
Iintlanzi - nasi esinye isizathu sokuba uyonwabele intlanzi! ezinye iintlobo zeentlanzi ezifana ne-tuna, iisalmon kunye neesardadi yimithombo etyebileyo ye-NAD + yomzimba.
Amakhowa-abantu abaninzi bayawathanda amakhowa kunye nabo njengokutya okuqhelekileyo kukutya kwabo kwesiqhelo. Kodwa ubusazi ukuba amakhowa, ngakumbi amakhowe e-crimini, ayanceda ekunyuseni ngokwendalo amanqanaba e-NAD? Ewe kuyinyani. Ke, konwaba ukutya amakhowa kwaye uqhubeke ujongeka kwaye umncinci kwaye ulutsha ngakumbi!
Igwele- sisithako esisetyenziselwa ukwenza isonka kunye nezinye iimveliso zokubhaka. Igwele liqulathe iRiboside Nicotinamide (RN), eyandulela i-NAD. Nasi esinye isizathu sokuba ukonwabele ukutya kweebhaki zakho okanye iivenkile zakho nanini na undwendwela indawo ekubhakwa kuyo! Yonwabela ukutya okuthandayo ngelixa ukonyusa amanqanaba e-NAD ngaxeshanye. Kupholile oko!
Imifuno eluhlaza - imifuno eluhlaza inazo zonke iintlobo zezakha mzimba eziluncedo ngeendlela ezahlukeneyo. Kutshanje, kuye kwavela ukuba imifuno eluhlaza ikwangumthombo olungileyo we-NAD yomzimba. Eminye yale mifuno ibandakanya i-ertyisi kunye ne-asparagus.
Iinkozo ezipheleleyo-njengoko kuchaziwe ngaphambili, iVitamin B3 ikwanayo ne-RN, eyandulela i-NAD. Nangona kunjalo, xa imifuno, izinto zokutya okanye iinkozo ziphekiwe okanye zilungiswa, baphulukana nesondlo kunye nomthombo wevithamini. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba kufuneka utye imifuno eluhlaza kunye nokutya ukutya okuziinkozo endaweni yokutya okwenziweyo.
Nciphisa iZiselo ezinxilisayo-i-NAD inoxanduva lokugcina iinkqubo zemetabolism zomzimba. Utywala buthanda ukuphazamisa ezi nkqubo kunye nokunciphisa ukusebenza kwe-NAD. Ke ngoko, kuya kufuneka ukuthintele ukuselela kakhulu iziselo ezinxilisayo kuba nazo azilunganga kwimpilo yakho.
'I-Niacin flush' sisiphumo esisecaleni sokuthatha idosi ephezulu ye-niacin eyongezelelweyo (Vitamin B3). Ukuqhuma kwenzeka xa i-niacin ibangela ukuba ii-capillaries ezincinci kulusu lwakho zide, ezonyusa ukuhamba kwegazi kumphezulu wolusu. Ngokungafaniyo nokufakwa kwi-vitamin B3 (niacin), inicotinamide riboside akufuneki ibangele ukugungxwa ebusweni.
I-NMN yi-nucleotide ephuma kwi-ribose kunye ne-nicotinamide. Njenge-nicotinamide riboside (Niagen), i-NMN sisiphumo se-niacin, kunye nomanduleli kwi-NAD +. I-NMN Canada: I-Nicotinamide mononucleotide ayifumaneki okwangoku njengesixhobo sokutya eCanada.
Kule minyaka idlulileyo, kwenziwe izifundo ezininzi zokufunda ukuba ukusetyenziswa kwe-NMN ebantwini kukhuselekile okanye akunjalo. Ezi zifundo ziye, amaxesha ngamaxesha, ziveze ukuba ukusetyenziswa kweNicotinamide Mononucleotide kukhuselekile ngokupheleleyo xa idosi yayo ithintelwe. Ngokubanzi, amadoda ayacetyiswa ukuba anamathele kwidosi yemihla ngemihla engaphantsi kwe-500 mg. Nangona kunjalo, kufuneka kugqitywe ukuba i-FDA ayikamkeli i-NMN njengechiza elikhuselekileyo. Ke, ukuba unayo nayiphi na into yokugula okanye iingxaki zonyango, kungcono ukuba ubonane nogqirha wakho ngaphambi kokuqala naziphi na izongezo ze-NMN.
I-NAD kunye ne-NMN zizinto ezidumileyo zokuxhasa ukuguga, kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo.
Ukunyusa ngokwendalo amaNqanaba eNAD
Izongezo zeNicotinamide Riboside
Ukukhanya kwelanga okuninzi kunokuba kungalungi!
Ukuphucula amanqanaba akho e-NAD, ungathatha iipilisi zeNMN zokulibaziseka ngeSirtuin Activator enje ngeResveratrol eneyogathi egcwele amanqatha enceda ukubakho kweResveratrol.
Ukuba ngoku uthatha i-NMN okanye ucinga ngokuqala, cinga ngokudibanisa ne-TMG njengenkxaso eyongeziweyo ye-methylation. Abanye abanikeli be-methyl abanokuba luncedo kubandakanya i-methylated B6, B12, kunye ne-folate.
Uyintoni umahluko phakathi kwenicotinamide kunye nenicotinamide riboside? (3)
I-Niacin luhlobo lwe-nicotine oluguqulweyo olunokuthi umzimba uguqulwe ube yi-NAD. INicotinamide yi-amide ye-niacin efana kakhulu ne-NAD kwaye ineziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa. I-Nicotinamide riboside yindlela yokwenziwa kwe-nicotinamide eneempawu ezahlukeneyo.
Njenge-nicotinamide riboside, i-NMN sisiphumo se-niacin, kwaye abantu banee-enzymes ezinokusebenzisa i-NMN ukuvelisa i-nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). Kwiimpuku, i-NMN ingena kwiiseli ngamathumbu amancinci ngaphakathi kwemizuzu eli-10 iguqula i-NAD + ngeSlc12a8 NMN yokuhambisa.
I-Nicotinamide riboside yinto eyenzeka ngokwendalo ye-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), umlamli obaluleke kakhulu kwiziphumo zothintelo lwekhalori, ngenxa yoko inoveli yekhalori yokuthintela imimetic compound. Kutshanje sigqibe isifundo sokuqala somlinganiso we-nicotinamide riboside supplementation kubantu abadala abasempilweni nabadala kwaye sabonisa ukuba iiveki ezi-6 zokuncedisa zinciphise uxinzelelo lwegazi (SBP) nge-8 mmHg kubantu abane-SBP esisiseko ye-120-139 mmHg (iphakanyisiwe i-SBP / Isigaba 1 soxinzelelo lwegazi) xa kuthelekiswa ne-placebo, kunye nokuthomalalisa ukuqina komzimba, isimilo esomeleleyo esizimeleyo se-CVD kunye nokugula okukhoyo kunye nokufa.
I-Betaine ifumaneka kwi-microorganisms, kwizityalo nakwizilwanyana kwaye yinto ebalulekileyo kukutya okuninzi, kubandakanya ingqolowa, iqokobhe, isipinatshi kunye neeswekile. I-Betaine sisixhobo se-zwitterionic quaternary ammonium esikwabizwa ngokuba yi-trimethylglycine, glycine betaine, lycine, kunye ne-oxyneurine.
Nazi izinto ezilishumi zokutya ezichasene nokwaluphala ukuze wondle umzimba wakho ngokukhanya okuvela ngaphakathi.
Ipelepele ebomvu yentsimbi
Sebenzisa iMask yokuHamba.
Khetha iSiseko seLuminous
Khanyisa iinwele zakho kancinci
Ukukhupha kwakhona (kodwa ungadluli)
Mhlophe uManzi wakho
Gqibezela ukuKhangela ngeNgcaciso yeMaminerali
Khusela ulusu lwakho elangeni yonke imihla
Faka isicelo sokuzicoca ngokwakho kunokuba ufumane itan
Ukuba uyatshaya, yeka
Kulumkele ukuphindaphinda imbonakalo yobuso
Yitya ukutya okusempilweni, okunesondlo
Sela utywala obuncinci
Zilolonge iintsuku ezininzi zeveki
Coca ulusu lwakho ngobunono
Iitapile zamazambane aswiti eefrench
Isonka esihluthiweyo sesonka esimhlophe
Ubusi okanye iziqhamo zeswekile emhlophe
Ioyile yomnquma okanye iiavokhado zemargarine
Namathela kwiinkukhu zenyama ehleliweyo
Cinga kabini ngesoda kunye nekofu
Sela utywala ngobungcathu
Cima iikeyiki zerayisi
I-Vitamin C inokukunceda ukukhusela iimpawu zokwaluphala ngenxa yendima yayo ebalulekileyo kulwakhiwo lomzimba lwe-collagen. Kuyanceda ukuphilisa ulusu olonakeleyo kwaye, kwezinye iimeko, kunciphisa ukubonakala kwemibimbi. Ukutya ngokwaneleyo i-vitamin C kunokunceda ekulungiseni nasekuthinteleni ulusu olomileyo.
Ukuguga kunxulumene nexesha kunye nokuncedwa kwexesha lokuphinda kubuyiswe kwimisebenzi yomzimba womntu. Nangona ukuguga kungenakuphepheka kwaye kungenakuthintelwa, izazinzulu zinikele iminyaka ekuqondeni ukuba le nkqubo ingalibaziseka kwaye ilawulwe njani. Olu phando luqhubekileyo lukhokelele ekufumanekeni kwezinto ezininzi kunye nezinto ezinento yokwenza nokuguga ezinokuguqulwa zibe zizongezo ezichasene nokwaluphala. Enye yezi zinto zinento ebalulekileyo yokulwa ukwaluphala eneenzululwazi eziziva zinomdla yiNMN okanye iNicotinamide Mononucleotide. Kule nqaku, sixoxa ngayo yonke into ekufuneka siyazi malunga ne-NMN kunye nesona saphulelo sokuguga se-nicotinamide mononucleotide ngo-2022.
Kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo, zonke izifundo ezinxulumene nokusetyenziswa kwe-NMN bezisenziwa kwizilwanyana kwaye ngelixa ezi zifundo zibonisa iziphumo ezithembisayo, ezi ziphumo bezingonelanga ukuseka izibonelelo zokusetyenziswa kwe-NMN ebantwini. Ngo-2016, kwaqhutywa isifundo ukuhlalutya ukhuseleko lokusetyenziswa kwe-NMN kunye nexesha layo kwigazi lomntu. Isifundo sihambise iziphumo ezithembisayo. Thumela ukuba, olunye uphando luqhutywe ngo-2016 ukufundisisa umphumo wokusetyenziswa kwe-NMN kwabasetyhini abadala abangama-50 abane-BMI ephezulu, i-glucose yegazi kunye ne-triglycerides yegazi. Isifundo siphumelele. Nangona kunjalo, kuba umhlaba wokufunda wawunqunyelwe kuphela kwabasetyhini abakwiminyaka ethile, izazinzulu zazikholelwa ekubeni ubungqina obungakumbi bufuneka ukufumanisa ukuba ukusetyenziswa kweNMN kukhuselekile ebantwini.
Ke ngoko, kutsha nje, ngo-2019, kwaqhutywa isifundo kwiZiko loLingo lweKlinikhi yeYunivesithi yaseKeio University of Medicine. Isifundo sophononongo yayingamadoda ayi-10 aneminyaka ephakathi kwengama-40 nama-60. Amadoda la ayelawulwa ngethamo ukusuka kwi-100 mg ukuya kuma-500 mg. Uphononongo luqukumbele ukuba i-NMN ayanyamezelwa kakuhle ngabantu kwaye ikhuselekile ukuba ichithe ixesha elide njengoko ukusetyenziswa kwayo kulawulwa kakuhle. Olu phononongo lwalubaluleke kakhulu njengoko lwalusisifundo sokuqala se-NMN esenziwe ebantwini sokufunda isiphumo se-NMN kwimpilo yoluntu ngokubanzi. Kwakamsinya nje ukuba kufumaneke ukuba ukusetyenziswa kwe-NMN kukhuselekile, abavelisi baqala ukugcwala kwimakethi ngezongezo ze-NMN, esele zixhaphakile ezi ntsuku.
Kweli candelo, sixoxa ngezibonelelo ezinokubakho ezinxulunyaniswa neNicotinamide Mononucleotide okanye izibonelelo zeNMN.
I-NMN inciphisa ukuguga
Enye yezona nzuzo zibalaseleyo ze-NMN kukuba kunciphisa inkqubo yokuguga. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, uDavid Sinclair, ugqirha webhayoloji odumileyo wase-Australia kunye noprofesa weGenetics, wanikela ubungqina bokuba i-NAD + iyacothisa ukuguga kunye nokuqala kwezifo ezinxulumene nobudala ebantwini. Nangona kunjalo, ukuveliswa kweNAD + kunciphisa ngobudala. Ke, njengoko abantu bekhula, isidingo sangaphambi kwe-NAD + siyanda ngaphakathi kwemizimba yabo. Kulapho i-NMN iqala khona ukudlala: I-NMN ingena kwiiseli kwaye iguqulwe ngemichiza emininzi ngaphambi kokuba iguqukele kwi-NAD + kwaye inciphise iinkqubo zokuphelisa ubudala.
② Abantu abaPhethwe sisifo seSwekile banokuxhamla ekusebenziseni kwaso
Kwaqhutywa isifundo sokufunda indlela isongezelelo somlomo se-NMN esinceda ngayo ekutyeni nakwisifo seswekile esimalunga nobudala kwiimouse. Uphononongo luveze ukuba iimpuku ezinikezwe ngomlomo ze-NMN ziyabonakalisa ukonyuka kweemvakalelo nge-insulin kunye nokukhuseleka kwayo okuthe kratya. Olu pho nonongo lubonelele ukuba iNicotinamide Mononucleotide okanye i-NMN isongezelelo ngomlomo sinokunceda abantu abanesifo seswekile.
Cons Ukusetyenziswa kweNMN kukwaNxulunyaniswa neMpilo yeNtliziyo ephuculweyo
Olunye uphononongo lwenzelwa ukufunda ngendlela i-NMN supplementation eyichaphazela ngayo impilo yeentliziyo kwiimpuku Uhlolisiso luveze ukuba i-NMN ayibuyisi kuphela umchiza wegazi onxulumene nobudala kunye nomonakalo we-capillary kwiimpuku kodwa wakhokelela nasekuphuculeni ukuhamba kwegazi. Eyona nto yandothusa kakhulu yinto yokuba kwiigundane ezinikwe i-NMN isongezelelo ngomlomo, ukuqhuma kwemithambo yegazi emitsha kwaqatshelwa. Kutshanje, kuye kwenziwa olunye uphando ukuze kufunyanwe iimpembelelo ze-NMN kwimpilo yeendlebe kwaye olu phando luveze iziphumo ezifanayo. Ezi zifundo zinikeze ubungqina obaneleyo kubaphandi ukuba bakholelwe ukuba ukusetyenziswa kwe-NMN kukhuthaza impilo yentliziyo ebantwini.
INicotinamide Mononucleotide (NMN)
④ Abantu abaneAlzheimer's banokuzuza kuNcedo lweNMN
Kubantu abaphethwe sisifo i-Alzheimer, amanqanaba e-NAD ayehla kakhulu. Ke, xa abantu abanesifo se-Alzheimer besebenzisa i-NMN, umzimba uphendula ngokwandisa inani le-NAD +, ethi yona ikhokelele ekwandeni kolawulo lweemoto, inyuse i-SIRT3 yemfuza, inkumbulo ephuculweyo kunye nokunciphisa i-neuroinfigueation. Ke, abantu abane-Alzheimer's banokuxhamla ngokutya I-NMN.
I-NMN ikwaphucula ukusebenza kweZintso
Isongezelelo somlomo se-NMN sidityaniswa nomsebenzi ophuculweyo wezintso. Kungenxa yokuba i-NMN yonyusa imveliso ye-NAD + kunye ne-SIRT1, yomibini edityaniswa nomsebenzi owandisiweyo wezintso.
Ukuba ujonge ukuthenga iNicotinamide Mononucleotide (NMN) powder ngobuninzi, eyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga i-NMN powder yile cofttek.com. I-Cofttek lishishini lobuchwephesha obuphezulu elinika imveliso kunye nomgangatho ophezulu ukusukela ngo-2008. Inkampani iyaqhayisa ngeqela le-R & D elinomtsalane elinabantu abanamava abazinikele kuphuhliso lweemveliso ezikhuphisanayo. Cofttek inamaqabane kwaye inikezela ngeemveliso zayo kwiinkampani ezixuba amayeza e China, Europe, India nase North America. I-Nic-Nicotinamide Mononucleotide ekhutshwa yiCofttek ikumgangatho ophezulu kakhulu kwaye ikhuseleke ngokupheleleyo ukuba isetyenziswe ngabantu. Okubaluleke ngakumbi, inkampani ibonelela ngalo mgubo ngobuninzi, okt kwiiyunithi ezingama-25kgs. Ke, ukuba ujonge thenga le powder ngobuninzi, I-Cofttek yinkampani ekufuneka unxibelelane nayo-zezona zinto zibonelela nge-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) yomthengisi we powder kwimarike.
(1). Yao, Z., et al. (2017). INicotinamide Mononucleotide inhibisha ukwenziwa kweJNK ukubuyisa isifo seAlzheimer.
(2). UYoshino, uJ., Et al. (2011). INicotinamide Mononucleotide, i-NAD ephambili (+) ePhakathi, inyanga iPathophysiology yokutya kunye nesifo seswekile esidala kwiigundane. Iseli yeMetabolism.
(3). Yamamoto, T., okqhubekayo. (2014). I-Nicotinamide Mononucleotide, ephakathi kwe-NAD + Synthesis, Ikhusela Intliziyo kwi-Ischemia kunye neReffusion.
(4). UWang, Y., et al. (2018). Ukongezwa kwe-NAD + kulungelelanisa iiMpawu zeAlzheimer eziphambili kunye neempendulo zomonakalo weDNA kwiModeli eNtsha yeMouse ye-AD kunye neNzelelo yokuLungiswa kweDNA.
(5). UKeisuke, O., et al. (2019). Iziphumo zokutshintsha kweMetabolism ye-NAD kwiNgxaki yeMetabolic. Ijenali yeeNzululwazi zeBiomedical.
(6). Uhambo lokujonga umz.
(7). I-Oleoylethanolamide (oea) -i-wand yemilingo yobomi bakho.
(8). I-Anandamide vs cbd: yeyiphi engcono kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi ngabo!
(9). Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-nicotinamide riboside chloride.
(10). Izongezo zeMagnesium l-threonate: izibonelelo, idosi, kunye neziphumo ebezingalindelekanga.
(11). Palmitoylethanolamide (ertyisi): izibonelelo, idosi, ukusetyenziswa, isongezelelo.
(12). Izibonelelo zezempilo ezi-6 eziphezulu ze-resveratrol supplements.
(13). Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(14). Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(15). Olona hlobo longezelelekileyo lwe-alpha gpc.
Ndicinga ukuba i-NMN isebenza ngakumbi kune-nicotinamide riboside (NR), njengoko inokubamba ngcono kakhulu emathunjini amancinci.
Uphengululo lweBongo lweGeeHii
Ngokubanzi abantu kufuneka bafumane inani elifanelekileyo lokuxhasa imizimba yabo, ihlala phakathi kwe-250mg kunye ne-1g. Umdala wena, kokukhona unokuxhamla kwesiqhelo.
Sukuxhasa ngeNicotinamide (NAM) kuphela. Ngokwenyani yenza umva wento oyifunayo. Ukuba unika umzimba wakho i-NAM iya kubangela ukwehla kwe-NAD +.
Khetha i-NR okanye i-NMN. Kwakhona, ungazami ukuthenga izinto zexabiso eliphantsi eAlibaba okanye nantoni na. Kuqinisekisiwe kwixa elidlulileyo ukuba uninzi lwezinto eziyinyani kwaye zinokukulimaza.
Xa kuthathwe ngaphambi kokuba ube nomhlaza, amanqanaba aphezulu e-NAD + kufuneka anciphise umngcipheko wokutshintsha kwe-DNA kunye nokuqokelelwa kweeseli ze-senescent, ekuphela kwembambano yokwenyani ithatha i-NAD + booster ngeli xesha inomhlaza, njengoko inokukhawulezisa ukukhula kwezidumbu ezixhomekeke kwi-NAD + njengoko zisebenzisa i-NAD + kakhulu njengoko iiseli eziqhelekileyo zisenza, yiyo loo nto kulungile ukuba ujonge ukubalwa kweseli yakho emhlophe qho kwiinyanga ezimbalwa. Ukuba awunaso isifo somhlaza, kufuneka usithintele.
Andikwazi ukuthetha kwi-mitochondria yam, kodwa emva konyaka onesiqingatha ndithatha i-nmn (iilwimi ezincinci) kuya kufuneka uyikhuphe ezandleni zam ezibandayo ezibandayo.
Amandla amaninzi (amandla okugcina amandla, angaziva e-wired), ukubuyisela ngokukhawuleza ukuzilolonga kunye noxinzelelo, ukulala okungcono, nokuba wakhe izihlunu okokuqala ebomini bam.
Ulwimi lwangaphantsi kwe-NMN kwi-1g indinika ukonyusa amandla okubonakalayo. Ndiyibona ngokukhawuleza. Umbono wam nawo uyatshintsha (uye ubukhali). Kwakhona i-bonefish ibuyile ngexesha layo. ;-)
UDavid Sinclair ucebise ukuba iimpuku kwizicwangciso zeepilisi ezinamaphiko zinezona ndlela zokuphila zide kwaye iyavakala kum.
Ngokubanzi abantu kufuneka bafumane inani elifanelekileyo lokuxhasa imizimba yakho, ihlala iphakathi kwe-250mg kunye ne-1g.
Umdala wena, kokukhona unokuxhamla kwesiqhelo.
Hlala kuyo ixesha elide. Ndiqaphele amanxeba amadala anyamalalayo, iingxowa ezingaphantsi kwamehlo am, kunye notshintsho olukhulu kwimetabolism. Ngaphantsi kwe-hangover nayo iyinto eyiyo.
Enkosi, ndiyavuya ukubona inqaku elimnandi kwaye lihlekisayo.